तपाईंको गुगल मेरो व्यापार सूचीलाई निलम्बन गर्नमा के कारण भयो? - Semalt बाट SEO सुझावहरू
यदि तपाईंसँग गुगल मेरो व्यापार प्रोफाइल छैन भने, हामी तपाईंलाई एउटा प्राप्त गर्न प्रोत्साहन दिन्छौं। गुगल मेरो व्यवसाय एक नि: शुल्क सजिलो उपकरण हो जुन Google द्वारा प्रदान गरिएको छ व्यापार र संगठनहरूलाई गुगलको प्लेटफर्महरूमा तिनीहरूको उपस्थिति प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्न। यसले तिनीहरूको व्यवसायको अपडेट गरिएको समीक्षा साथै गुगल नक्सामा तिनीहरूको स्थान समावेश गर्दछ।
गत बर्ष, हामीले गुगल मेरो व्यवसाय उल्लेख गर्‍यौं र यसले संगठनहरू र व्यवसायहरूलाई जनतामा बढी पहुँचयोग्य बनाउँदछ। कम्पनीहरूले तपाईंको व्यवसाय पत्ता लगाउन, तपाईंको व्यवसायको बारेमा जान्नको लागि यो सजिलो बनाउँदछ, र यो तपाईंको व्यवसायको लागि प्रमाणिकरणको रूपमा काम गर्दछ।
जे होस्, यो लेख ब्यापारहरूको लागि हो जुनसँग पहिले नै प्रोफाइल छ तर आश्चर्य छ कि यदि उनीहरूको गुगल मेरो व्यवसाय (जीएमबी) प्रोफाइल अझै वैधको रूपमा सूचीबद्ध छ भने। यदि तपाईं त्यस वर्गमा पर्नुहुन्छ भने, हामीसँग GMO हरू निलम्बित हुने सामान्य कारणहरूको सूची छ। तपाईको जीएमबी ट्र्याकमा छ भन्ने कुराको लागि हामी यसलाई मार्गनिर्देशकको रूपमा प्रयोग गर्दछौं जसले गर्दा यसलाई कहिले पनि गुगलको क्रोधसँग डिलिन पर्दैन।
गुगल मेरो व्यापार किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
धेरै स्थानीय व्यवसायहरू GMB मा भर पर्छन् तिनीहरूका एक प्राथमिक अनलाइन मार्केटि। उपकरणको रूपमा। वास्तवमा, धेरै स्थानीय कम्पनीहरूले GMB लाई मात्र इन्टरनेट मार्केटिंग उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्छन्। अब हामी तपाईंलाई यो गर्न सल्लाह दिदैनौं किनकि यो जोखिमपूर्ण हो र बुद्धिमानी होइन। जहाँसम्म, केहि स्थानीय व्यवसायहरूसँग पर्याप्त स्रोतहरू छैनन् विज्ञापनको अन्य प्रकारहरू कोष गर्न GMB उपकरणमा पूंजीकरण गर्नु पर्छ।
उनीहरूले सामना गर्ने जोखिम यो हो कि जब तिनीहरू गुगल मेरो व्यापारको साथ मुद्दामा भाग लिन्छन्, तिनीहरू मार्केटिंगको एक मात्र विधिमा हराउँछन्। दुर्भाग्यवस यो घटना एकदम सामान्य छ किनकि यी साना व्यवसायहरू पेशेवरहरूलाई उनीहरूको जीएमबी सूची प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्न साह्रै सक्षम छ। हेरविचार बिना, तिनीहरू निलम्बित हुन्छन्।
यी व्यवसायहरूको लागि, GMO हरू तिनीहरूको विज्ञापनको एक मात्र प्रकार हो र त्यसमा एक धेरै प्रभावी हो। GMO हरू ले उनीहरूको स्थानीय स्थान, समीक्षा, हाम्रो बारे वर्णन र सेवाहरू प्रदान गर्दछ, यो उत्तम बजेट-अनुकूल उपकरण हो।
एक Google मेरो व्यापार निलम्बनको साथ, तपाईंको प्रोफाइल गुगल खोजी वा नक्सामा देखा पर्न रोक्दछ, वा तपाईंको सूचीबद्ध अप्रमाणित छ, र तपाईं कुनै परिवर्तन गर्न वा तपाईंको प्रोफाइल व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न। किन यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले सम्भावित कारणहरू फेला पार्नुभयो जुन एक सस्पेंशनको वारेन्ट हुन सक्दछ कि गुगलले खाता मालिकहरूलाई उनीहरूको खाताहरू किन निलम्बन गरिएको भनेर बताउँदैन। सगाईका नियमहरूमा अशिक्षित नवजात शिशुहरू र व्यवसायिक मालिकहरू त्यसपछि उनीहरूले के गलत गरेका हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाएर छोडिन्छ जुन परिणामस्वरूप निलम्बन भयो।
यस लेखमा, हामी GMB लिस्टिन्ग किन निलम्बन गरिन्छ र तपाईं यसलाई कहिलेदेखि हुनबाट कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ भनेर प्राय जसो सामान्य कारणहरूको समीक्षा गर्नेछौं। Semalt एक एसईओ र वेब प्रबन्धन कम्पनी हो जुन साना साना व्यवसायका लागि पनि डिजाइन गरिएको हो जुन यातायात प्राप्त गर्न र रूपान्तरण गर्न चाहन्छ। हामी सबैमा पहुँच योग्य छौं भनेर सुनिश्चित गर्न, हामी विभिन्न बजेट-अनुकूल प्याकेजहरू चलाउँछौं जुन तपाईंले चेक आउट गर्नुपर्दछ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं Google र उनीहरूको विशेष उपकरणहरूको साथ काम गर्ने बखत कुनै प्रकारको मार्गदर्शन प्राप्त गर्नुहोस्। जब तपाईलाई सहयोग चाहिन्छ तपाई सधै आउन सक्नुहुनेछ।
गुगल मेरो व्यवसाय प्रोफाइल निलम्बन हुन सक्ने सामान्य कारणहरू के के हुन्?
अब अन्तिम चीज तपाईले चाहानुहुन्छ एक सुन्दर बिहानीलाई जगाउनु र गुगलबाट ईमेल सूचना प्राप्त गर्नु जुन तपाईंको खाता निलम्बित गरिएको छ। उत्तम विश्वास गर्नुहोस् कि यसले तपाईंको कफीको स्वाद बिगार्न सक्छ। यदि तपाईं आफ्नो प्रोफाइल मा ध्यान दिएन छैन, दिन, हप्ता, वा महिना बित्न सक्नुहुनेछ तपाईंले याद गर्नुभयो कि तपाईंको सूचीबद्ध निलम्बित गरिएको छ।
हामी मुद्दाहरू ह्यान्डल गर्न विश्वास गर्दछौं उनीहरूको विकास वा प्रसारको लागि मौका पाउनु अघि। त्यसकारण हामी सक्रिय दृष्टिकोण प्रयोग गर्दछौं र किन धेरै जसो ब्यापार सूचिहरू निलम्बित हुन्छन् भन्ने सामान्य कारणहरूको बारेमा सिक्छौं। यो ज्ञानको साथ, हामी गुगल व्यवसाय लिस्टिंग किन निलम्बन हुन सम्भावित कारणहरू थाहा छ, र हामी तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्छौं।
सम्बन्धित विसंगतिहरू पत्ता लगाउनुहोस्
यो GMB निलम्बनको सब भन्दा साधारण कारणहरू मध्ये एक हो। यो हुन सक्छ जब तपाईं:
एक ठेगाना छ जुन एक यूपीएस स्टोरको नजिक छ।
जब तपाईं पीओ बक्स वा भर्चुअल अफिस/साझा कार्यक्षेत्र वा एक यूपीएस बक्स ठेगाना प्रयोग गर्नुहुन्छ।
यदि उही स्थान/ठेगानाका लागि त्यहाँ धेरै GMB सूचीहरू छन्।
जब तपाईंसँग बिल्डिंगमा चल्ने व्यापारको लागि सूचीबद्ध छ, तपाईंसँग स्वामित्व छैन।
स्थान परिवर्तनको परिणाम स्वरूप एक चाल निलम्बन। यो भर्चुअल/साझा अफिसबाट नयाँ कार्यालय स्थानमा हुन सक्दछ।
यदि एक सेवा क्षेत्र व्यवसाय GMB सूचीमा एक आवासीय ठेगाना प्रदर्शित गर्दछ।
अर्को मुद्दा हो जब व्यवसायहरूले आफ्नो भर्चुअल कार्यालयहरू वा सह-कार्य गर्ने ठाउँहरू अन्य व्यवसायहरूमा भाँडामा दिन्छन्।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि भर्चुअल अफिस ठेगाना प्रयोग गर्न सकिदैन जबसम्म कि कम्पनीले यसको विशेष प्रयोगको लागि कार्यकारी वा समर्पित कार्यालय भाँडामा दिँदैन। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, व्यवसाय पनि हुनुपर्दछ:
तिनीहरूको कार्यालयको ढोका बाहिर र कार्यालय वा लबी क्षेत्र भित्र स्थायी साइन गार्ड।
तिनीहरूसँग एक अद्वितीय सुइट नम्बर हुनुपर्दछ।
व्यापार कार्यालय भवन निर्देशिका मा सूचीबद्ध र तिनीहरूको सूट नम्बर ले हुनु पर्छ।
तिनीहरूसँग कामको घण्टाको बखत अफिसमा उनीहरूका कर्मचारीहरू हुनुपर्दछ।
यदि तपाइँ भर्चुअल अफिस ठेगाना प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाइँ निलम्बित हुनुभयो भने, चीजहरूको सूची यहाँ प्रयास गर्न को लागी:
नयाँ समर्पित कार्यालय स्थान खोज्नुहोस्। यो सबैभन्दा उत्तम र सुरक्षित मार्ग बाहिर हो।
यदि यो उपलब्ध छ भने तपाईं भर्चुअल अफिस स्थानमा समर्पित कार्यालय भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको पुन: स्थापना अनुरोध फाइल गर्दा, तपाईंको लीज सम्झौताको एक प्रतिलिपि सबमिट गरेर तपाईंको समर्पित कार्यालय भाडाको प्रमाण प्रदान गर्नुहोस्, भिडियोहरू र फोटोहरू समावेश गर्दै:
तपाईं आफैंको भवनमा हिंड्दा।
तपाइँको व्यवसायको नाम र सूट नम्बरको साथ एक कार्यालय निर्देशिका।
तपाइँको समर्पित कार्यालय ढोका एक साइनेजको साथ।
कार्यालय लबी भित्र व्यवसायको संकेत।
गुगल मेरो व्यवसाय निलम्बन एकैचोटि धेरै प्रोफाइल सम्पादन गर्नका लागि
तपाईको GMB प्रोफाइल खोले पछि तपाईले के धेरै लामो समय सम्म महसुस गर्नुहुने छैन कि यसमा काम गर्दा कुनै समस्या हुन सक्छ। यो वास्तवमै गरेको भन्दा धेरै सजिलो छ। कहिलेकाँही, एकै पटक तपाईंको प्रोफाइलमा परिवर्तनहरूको गुच्छा बनाउँदा एक निलम्बन ट्रिगर गर्न सक्छ।
सत्य यो हो कि कोहीले वास्तवमा बुझ्दैनन् किन यस्तो हुन्छ, तर यस्तो हुन सक्छ कि गुगलले यी अपडेटहरूलाई श susp्कास्पद ठाने। यस कारणका लागि, हामी प्रायः सल्लाह दिन्छौं कि तपाईले एक पटकमा परिवर्तनको हात बनाउनुहोस्, सामान्यतया एक वा दुई। तपाईं त्यसपछि अर्को परिवर्तन गर्नु भन्दा पहिले करीव minutes० मिनेट कुर्नुहोस्। एक पटकमा धेरै धेरै परिवर्तन गर्नु निलम्बनको जोखिमको लागि लायक छैन।
एल्गोस, फ्लुक्स, बगहरू, र गुगल स्वीपहरू
कहिलेकाँही खराब चीजहरू हुन्छन्। जीएमबी खाताहरू गुगलको एल्गोरिदम, बगहरू, वा कुनै राम्रो कारण बिनाका कारण निलम्बन गरिएको छ।
Google ले उनीहरूको GMB ड्यासबोर्डमा साना परिवर्तनहरू गरिरहेको हुन सक्छ, जसले केहि खाताहरूको निलम्बनलाई ट्रिगर गर्न सक्दछ। उनीहरूले स्प्यामी व्यवसाय वा उद्योगहरूको प्रणाली खाली गर्न व्यापक रूपमा काम गरिरहेका हुन सक्छन्, र तपाईं अशुभ हुन सक्नुहुनेछ यदि तपाईं वैध हुनुहुन्छ भने पनि।
यदि यो तपाईंको खातामा भयो भने, तपाईं यसलाई Google मेरो व्यापार दिशानिर्देशहरू ध्यानपूर्वक पढेर यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र सुनिश्चित गर्नुहोस् तपाईं पालनामा हुनुहुन्छ। त्यस पछि, तपाईं पुनर्स्थापना अनुरोध भर्न को लागी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र गुगलबाट प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न करीव hours२ घण्टा कुर्नुहोस्।
अनलाइन मात्र व्यवसायहरू
यो कुनै परिणामको नहुन सक्छ, तर गुगल मेरो व्यापार सूची स्थानीय व्यापारको मद्दतको लागि सिर्जना गरिएको थियो। नतिजाको रूपमा, कडाईका साथ अनलाइन व्यवसायहरू गुगल मेरो व्यापार सूचीको लागि योग्य हुँदैन। त्यसोभए यदि तपाइँले एक GMB प्रोफाइल सिर्जना गर्नुभएको छ र यो निलम्बित भयो भने, तपाइँले के गल्ती गर्नुभयो भनेर मंथनको चिन्ता नगर्नुहोस्।
Google My Business TOS उल्लंघन गर्दै
धेरै अन्य सेवाहरू जस्तै, गुगलका सेवा सर्तहरूको उल्ल .्घन तपाईंको खाता निलम्बन गर्ने एक तरिका हो। गुगलको मेरो व्यापार सेवा सर्तहरू सबैका लागि दिशानिर्देश हुन्। कुनै पनि हालका घटनाहरूको बारेमा सचेत रहन यी निर्देशनहरू महिनामा कम्तिमा एक पटक जाँच गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
कहिलेकाँही यी दिशानिर्देशहरू मुश्किल र अस्पष्ट हुन्छन् जसले उनीहरूलाई विशेषज्ञको भ्रममा पार्ने विभिन्न किसिमका व्याख्याहरूको अधीनमा पार्दछ। जहाँसम्म, तपाईलाई जति धेरै थाहा छ, राम्रो छ, त्यसैले यसलाई पढ्ने प्रयास गर्नुहोस्, र तपाईले नसक्ने क्षेत्रहरूमा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ।
NB: यी केवल केहि कारणहरू छन् जुन तपाईंको खातालाई निलम्बन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ यद्यपि धेरै अन्य कारणहरू छन् जुन GMB सूचीहरू स्थगित हुन्छन्। तपाईको सुची गुगलको सर्च ईन्जिनमा किन देखिंदैन भनेर पत्ता लगाउन, माथिका सबै मुद्दाहरूलाई फिक्स गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि केहि परिवर्तन हुँदैन भने, कृपया Semalt लाई सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईको प्रोफाइल समीक्षा गर्नका लागि।
तपाईंको GMB प्रोफाइल महत्त्वपूर्ण ईन्टरनेट मार्केटिंग सम्पत्ति हो। यो एक निलम्बन परिणाम अघि यी सामान्य प्रयासहरू सक्रिय, बुझ्ने, र ठीक गर्न उत्तम छ। हामीले यी मुद्दाहरूको बारेमा राम्ररी अनुसन्धान र विस्तृत मार्गनिर्देशनहरू प्रदान गरेका छौं र यदि ती कहिले भएमा तिनीहरूलाई कसरी ठीक गर्ने भनेर। र यदि तपाईं अझै पछाडि हुनुहुन्छ भने, तपाईं जहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ Semalt सहयोगको लागि।
हाम्रो ग्राहक सेवा सेवा टिम विशेषज्ञहरु बाट बनेको छ जो तपाईको कलहरु लिन वा तपाईको सन्देशहरुलाई जवाफ दिन हिचकिचाउँदैन। हामी यस शीर्षक वा कुनै अन्य एसईओ/वेब प्रबन्धन समस्याहरूसँग तपाइँको कुनै क्वेस्टमा जवाफहरू प्रदान गर्न सक्दछौं।